Iyo indasitiri yemuchina yekutengesa iri kupinda munguva yemurume. -Iindasitiri nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Micro Musika Vending Machine
Erevheta Vending Machine
Chikafu Vending Machine
Kofi Yekutengesa Machine
Inwa Vending Machine
Zvokurapa zvekutengesa Vending Machine
Iyo indasitiri yemuchina yekutengesa iri kupinda munguva yemurume.
Views:9 Author: Shambadzira Nguva: 9 Origin:
Kufambira mberi kunoenderera kwevekutengesa muchina mamodheru kunowedzerazve hukasha hwechigadzirwa hunogona kutengeswa, kubva pakutengesa kuri nyore kusvika mukubatanidzwa nekutengesa uye kubhadharisa, michina yekutengesa iri kugadzira zvimwe zviitiko zvekushandisa kunze kwenyika. Iko kusanganisa kwekubvuma kumeso kubhadhara uye otomatiki kutengesa uye nekukurumidza kurodha kunoita kunze kwekushandisa mashandiro zvakanyanya kurerutswa, inopa zvirinani zvekutenga ruzivo. Nhanho imwe chete kubva pakusarudza kubhadhara, nyore nyore kusiya maitiro ekutaurisa kodhi kuburikidza nhare mbozha.
Zvinoenderana neyakajairika mamiriro ekutengesa musika muEurope, United States neJapan, huwandu hwepasi rese hwemashini mu2016 hwasvika mamirioni emamiriyoni e18.9, kuwedzera kwe5% pagore.
Pamusoro pechigadzirwa, michina yekutengesa inopa yakawanda zvigadzirwa uye inoteerera zvakanyanya kune pfungwa yehupenyu hupenyu, pazvinhu zvetekinoroji, michina yekutengesa ichaita akasiyana masevhisi nehungwaru seyayo yepakati. Pamusoro pechinhu chebhizinesi, echinyakare anozvishandira ekutengesa michina emakambani kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira huchenjeri, uye nekudaro inosimudzira masevhisi ari nyore uye anoshanda kune akasiyana maficha.
Kubatanidzwa kwevending indasitiri yemuchina neInternet kuri kuenda zvakadzama, nekuvandudzwa kwetekinoroji zvitoro zvisina kuchengetwa zviri kuramba zvichitekeshera mune ino indasitiri, mhando dzakasiyana dzemuchina, mabasa akasiyana uye zviitiko zvakasiyana zvekushandisa zviri kusundira iyo indasitiri yemuchina munguva huru ye "Isingatarisirwe. chitoro ”.
Prev: Zoomgu: Makina akangwara ekutengesa anoita smart shopu yakapusa uye nyore
Zvadaro: Ndeupi maonero Vending muchina musika?